पूर्व प्रहरीको पत्थर उद्योग « News of Nepal
दैलेखमा पहिलो पटक पत्थर उद्योग संचालनमा आएको छ । घरको छानो छाउन, आँगन तथा पेटीमा विच्छ्याउन प्रयोग गरिने पत्थरको खानी रहेको दैलेखमा उद्योग संचालनमा ल्याइएको हो । स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिनुका साथै विदेशी मार्वल विस्थापित गर्ने उदेश्यले दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ विन्ध्यावासिनीका काँडाका हरि विष्टले व्यक्तिगत लगानीमा विन्ध्यावासिनी पत्थर उद्योग संचालनमा ल्याउनुभएको हो । नेपाल प्रहरीको पूर्व हवल्दार समेत रहनु भएको विष्टले जिल्ला सदरमुकाम स्थित नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ मा उक्त उद्योग स्थापना गर्नुभएको हो । २०५७ सालमा प्रहरी सेवामा प्र्रवेश गर्नुभएका विष्ट २०७४ मा पेन्सन रिटायर्ड हुनुभएको थियो ।
उद्योगका लागि टायल काट्ने मेसिनहरु ल्याएको भन्दै उद्योग संचालक विष्टले गाउँमै लिएर पत्थर काट्न सकिने पेट्रोलियम मेसिन केहि दिनमै दैलेख आइपुग्ने बताउनुभयो । हाल जिल्लाको नारायण नगरपालिका ११ विन्ध्यावासिनी र भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडाभैरबबाट पत्थर उद्योगमा ल्याउने गरिएको उहाँको भनाई छ । गाउँबाट पत्थर संकलनका लागि ७ जना युवाहरु खटिएको बताउँदै विष्टले हाल मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिएर उद्योगमा एक जना मिस्त्री राखिएको जानकारी दिनुभयो । यस अघि बाटै बाख्रा पालन व्यवसाय संचालन गर्दै आउनुभएको विष्टले डेढ लाखको लगानीमा पत्थर उद्योग संचालनमा ल्याउनुभएको हो । आफ्नो उद्योगमा उत्पादन हुने पत्थर विदेशी मार्वल भन्दा सस्तो पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दैलेखमा उत्पादन भएको पत्थर कर्णालीको प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगर सुर्खेत तथा काठमाण्डौ सम्म पु¥याउनु योजना रहेको सुनाउनुभयो ।
उद्योगको नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख रत्न बहादुर खड्का, उपप्रमुख सावित्री मल्ल, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर थापाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ । उद्योग उद्घाटन गर्नुहुँदै नारायण नगरप्रमुख रत्न बहादुर खड्काले जिल्लामा संचालनमा आएका यस्ता उद्योगहरुले बेरोजगारी समस्या निराकरण हुँदै जाने बताउनुभयो । स्थानीय स्तरमा हुने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न सके रोजगारी सृजना संगै जिल्लाको आर्थीक समृद्धिमा टेवा पु¥याउनु उहाँको भनाई थियो ।